नायब सुब्बा गुप्तासँग स्रोत नखुलेकाे १५ करोड सम्पत्ति ! - लोकसंवाद
नायब सुब्बा गुप्तासँग स्रोत नखुलेकाे १५ करोड सम्पत्ति !
काठमाडौँ । सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्ने भनेकै नागरिकलाई सरल र सहज सेवाका लागि हो ।
नागरिकको सेवा गरेबापत राज्यले कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिएको हुन्छ । तर, सरकारी सेवामा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन लाग्नेलाई नेपाली समाजले ‘पाप’ गरेको ठान्छ । यस्तै भएको छ मालपोत कार्यालय सिमरामा कार्यरत नायब सुब्बा मदनप्रसाद गुप्तालाई ।
गुप्ताको वैध आय चार करोड ५४ लाख ७२ हजार २४६ देखिएको छ । तर आयोगले गरेको अनुसन्धानमा गुप्ताको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार २३ रहेको पाइएको छ । आयोगको अनुसन्धानअनुसार गुप्ताको कूल सम्पत्ति १९ करोड ३६ लाख ६१ हजार १६९ रहेको छ ।
आयोगले गुप्ताकी श्रीमती रिता देवी, छोराहरु विक्की गुप्ता र रक्की गुप्ता, अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहयोग पुर्‍याउने निरजकुमार गुप्ता, जुगुली प्रसाद र जगतनारायण यादव विरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । पदीय दुरुपयोग गरेर गुप्ताले पेट्रोल पम्प, पसललगायतमा लगानी गरेको पाइएको छ ।
विष्फोटक पदार्थसहित तीनजना प्रहरी नियन्त्रणमा
पोलेण्डसहित उर्गेन र श्रेष्ठ पक्राउ
अवैध सुनचाँदीको गरगहना सहित युवक पक्राउ